ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း (Chest Pain) by popolay.com
29 Jan 2021 21,726 Views
ရင်ဘတ်နာတယ်ဆိုတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လာတတ်ပါတယ်၊ မသိမသာ တစ်ချက်တစ်ချက်မှာ ထအောင့်တာကနေ ဓါးနဲ့ ထိုးလိုက်သလို စူးခနဲအောင့်တာမျိုးအထိ အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်ပေါ် တစ်ခုခုနဲ့တက်ဖိထားသလိုလည်း ဖြစ်နိုင်သေးသလို မီးစနဲ့ထိုးသလို ရင်ပူပြီး ခံစားနေရတဲ့သူလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ တချို့သူတွေမှာဆို ရင်ဘတ်ကနေတစ်ဆင့် လည်ပင်း၊ မေးရိုး၊လက်မောင်း စတဲ့နေရာတွေကိုလည်း ပျံ့နှံ့သွားတတ်ပါသေးတယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်တာကိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်အစိုးရိမ်ရဆုံးကတော့ နှလုံးနဲ့ အဆုတ်ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်တယ်ဆို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာမို့ ဘယ်လိုပဲအောင့်အောင့် ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
ဖြစ်စေတဲ့အောက်ခံအကြောင်းအရင်းပေါ်မူတည်ပြီး ရင်ဘတ်အောင့်တာကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လာနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း နှလုံးရောဂါရှိလို့ဆိုပြီး ပြောလို့မရပါဘူး။ အခုနေရာပေါ်လိုက်ပြီး ပြမဲ့လက္ခဏာလေးတွေကို တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ
ရင်ဘတ်အောင့်ရင် နှလုံးရောဂါနဲ့အများဆုံးဆက်စပ်နေပေမဲ့ လူအတော်များများကတော့ ရင်ဘတ်မှာနာကျင်တယ် ဆိုတာထပ် ဒီအတိုင်းမသက်မသာခံစားရတယ်လို့ပဲ ထင်တတ်တယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်တာက နှလုံးကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါလက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုထပ်ပိုတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ လာပါလိမ့်မယ်
- ရင်ဘတ်ပေါ် တစ်ခုခုလာဖိထားသလိုခံစားရမယ်၊ ရင်ဘတ်ကြီးတင်းကျပ်နေမယ်
- ဒီလိုတင်းကျပ်နာကျင်မှုက နောက်ကျော၊ လည်ပင်း၊ မေးရိုး၊ ပုခုံး၊ လက်မောင်းတစ်ဖက်တည်းသော်လည်းကောင်း၊ ၂ ဖက်စလုံးသော်လည်းကောင်းပျံ့သွားမယ်
- နာကျင်မှုကလည်း တစ်မိနစ်ထပ်ပိုကြာမယ်၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်လိုက်ရင်ပိုဆိုးသွားမယ်၊ နားလိုက်လို့ပျောက်သွားပြီးရင်လည်းပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
- ပျို့အန်မယ် ဒီလိုလက္ခဏာတွေပြနိုင်ပါတယ်
တခြားအကြောင်းတွေကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်တာလား နှလုံးကြောင့်အောင့်တာလားဆိုတာ ရုတ်တရက်ဆိုခွဲခြားဖို့ခက်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ရင်ဘတ်အောင့်တာ နှလုံးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဒီလက္ခဏာတွေပြနိုင်ပါတယ်...
- အစာစားလိုက်ရင် ပါးစပ်ထဲမှာ ချဉ်သလိုလို တစ်မျိုးကြီးအရသာရမယ်
- ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံအနေအထားပြောင်းလိုက်ရင် နာကျင်တာပိုဆိုးမယ်
- အသက်ပြင်းပြင်းရှုလိုက်ရင် ဒါမှမဟုတ် ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါ ရင်ဘတ်ပိုအောင့်လာမယ်
- ရင်ဘတ်ကိုဖိထားလိုက်ရင် ပိုဆိုးလာမယ်
- တစ်ခါတစ်ခါအောင့်ရင် နာရီနဲ့ချီကြာမယ်
ရင်ဘတ်ထဲပူနေမယ်ဆို ဒါဟာနှလုံးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သလို အစာအိမ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်အကြောင်းအရာဆိုတာ ရုတ်တရက်ခွဲခြားဖို့မလွယ်သလို အရေးတကြီးကုသမှုလည်း ခံယူဖို့လိုအပ်နိုင်တာကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်တာဖြစ်ရင် နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းကို အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်ရသလဲ... ?
ရင်ဘတ်အောင့်တာကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေ အများကြီးရှိသလို အကုန်လုံးကလည်း ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်
- နှလုံးရဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုမှာ သွေးခဲပိတ်သွားလို့ နှလုံးကြွက်သားတွေ အောက်ဆီဂျင်လုံလုံလောက်လောက် မရတော့တဲ့ အခါမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်
- နှလုံးကို သွေးပို့ပေးတဲ့ သွေးကြောတွေထဲမှာ အဆီတွေနဲ့ပြည့်လာလု့ိ သွေးကြောကျဉ်းလာတဲ့အခါ နှလုံးက လိုအပ်တဲ့သွေးပမာဏလုံလုံလောက်လောက်မရဘူးဖြစ်မယ်၊ ဒီအခါမှာလည်း ရင်ဘတ်အောင့်နိုင်တယ်
- အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေနောက်တစ်ခုက နှလုံးရဲ့ ပင်မသွေးလွှတ်ကြောကြီးရဲ့အတွင်းလွှာ ကွဲထွက်ပြီး သွေးတွေအပြင်ထွက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးဒီသွေးကြောကြီး လုံးဝပေါက်ထွက်သွားတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
- နှလုံးမှာသူ့ကို ကာထားတဲ့အလွှာတွေရှိပါတယ်။ ဒီအလွှာတွေရောင်ရမ်းတဲ့အခါမှာလည်း ရင်ဘတ်မှာ စူးခနဲ့အောင့်တာကို ခံစားရစေတယ်၊ အသက်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါနဲ့ အိပ်လိုက်တဲ့အခါတွေမှာပိုဆိုးတယ်။
အစာချေလမ်းကြောင်းမှာ ပြဿနာရှိလို့လား... ?
- အစာအိမ်ထဲက အစာချေအက်စစ်ဓာတ်တွေပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆို လူနာအနေနဲ့ ရင်ညွန့်ရိုးနောက်ဖက်က ပူစပ်ပူလောင်ကြီးခံစားရစေပါတယ်
- အစာမျိုလမ်းကြောင်းမှာ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေရင်လည်း တံတွေးမျိုရခက်စေတယ်၊ ရင်ဘတ်အောင့်မယ်
- သည်းခြေအိတ်ကျောက်တည်တာ၊ သည်းခြေအိတ်ရောင်တာ၊ မုန့်ချိုအိတ်ရောင်တာ စတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လည်း ဗိုက်နာပြီး ဒီနာကျင်မှုက ရင်ဘတ်ကို ရွေ့သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။
ကြွက်သားနဲ့ အရိုးမှာပြဿနာရှိလို့လား... ?
တခါတလေ ရင်ဘတ်အောင့်တာက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကြောင့်လည်း ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
- နံရိုးအိတ်ကြားက အရွတ်တွေ၊ အထူးသဖြင့် ရင်ညွှန့်ရိုးနဲ့ နံရိုးတွေဆက်သွယ်တဲ့နေရာက အရွတ်တွေရောင်ရမ်းရင်လည်း ရင်ဘတ်နာတတ်ပါတယ်
- နာတာရှည်ကြွက်သားနာကျင်တဲ့ရောဂါရှိရင်လည်း ရင်ဘတ်အောင့်တတ်ပါတယ်
- ထိခိုက်ဒဏ်ရာတစ်ခုခုကြောင့် နံရိုးကျိုးတာမျိုးဖြစ်သွားရင်လည်း ရင်ဘတ်အောင့်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ လာတတ်ပါတယ်။
- အဆုတ်ထဲက သွေးကြောတစ်ခုခုမှာ သွေးခဲပိတ်သွားရင် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို သွေးမရောက်တော့ပဲ နာကျင်တတ်ပါတယ်
- အဆုတ်ကို အပြင်ကနေ ကာပေးထားတဲ့အလွှာ ၂ထပ်ရှိပါတယ်၊ ဒီအလွှာတွေရောင်ရမ်းနေရင် ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ၊ အသက်ရှုတဲ့အခါတွေမှာ ရင်ဘတ်အောင့်နိုင်ပါတယ်
- အဆုတ်နဲ့ နံရိုးကြားနေရာမှာလေခိုရင် ဒီလေတွေက အဆုတ်ကို အပြင်ကနေလာဖိထားသလိုဖြစ်လာစေတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် လူနာအနေနဲ့အသက်ရှုရခက်မယ်၊ ရင်ဘတ်အောင့်ပါမယ်။
- အဆုတ်ထဲကို သွေးပို့ပေးတဲ့သွေးကြောတွေထဲမှာ သွေးပေါင်ချိန်တက်နေမယ်ဆိုရင်လည်း ရင်ဘတ်အောင့်တာနဲ့ လာနိုင်ပါတယ်။
- ရုတ်တရက် တစ်ခုခုကိုအကြီးအကျယ်ကြောက်ရွံ့သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဘတ်အောင့်တာတင်မက နှလုံးခုန်မြန်တာ၊ ချွေးတွေထွက်လာတာ၊ အသက်ရှူမြန်လာတာ၊ ပျို့အန်ချင်တာ၊ ခေါင်းတွေမူးလာတာ၊ ဘာအန္တရာယ်မှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြောက်စရာမရှိပဲ သေမှာကို ကြောက်လန့်နေတာ စတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့လာနိုင်ပါတယ်
- ရေကြောက်ရောဂါဖြစ်ရင်လည်း လူနာအနေနဲ့ နောက်ကျောကနေ ရင်ဘတ်အထိ အရည်ကြည်ဖုတွေပေါက်လာပြီး နာကျင်မှုလည်း ခံစားရပါမယ်။
ရင်ဘတ်အောင့်တာနဲ့ နှလုံးကြောင့်လို့တော့ သေချာပေါက်ပြောလို့မရပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ ရင်ဘတ်အောင့်လို့ ဆေးရုံရောက်ရင်တော့ နှလုံးကြောင့် ဟုတ်မဟုတ်သေချာအောင် သေချာစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်း ဆိုတော့ နှလုံးရောဂါကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်တာဆို လူနာအများစုအတွက် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရုံရောက်တာနဲ့ လုပ်မဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေကတော့
- နှလုံးစက်ဆွဲခြင်း (ECG) - နှလုံးစက်ဆွဲတဲ့အခါ လူနာရဲ့ရင်ဘတ်မှာ electrodes လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်က လျှပ်စစ်ကြိမ်နှုန်းကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့ ကပ်ခွာလေးတွေတပ်ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်။ ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်နေတဲ့ နှလုံးကြွက်သားက ပုံမှန်အတိုင်း လျှပ်စစ်ကြိမ်နှုန်းတွေမထုတ်လွှတ်နိုင်ပါဘူး။ ပုံမှန်အတိုင်းလျှပ်စစ်လှိုင်းထုတ်မထုတ်ကို ကြည့်ပြီး နှလုံးအခြေအနေကို မှန်းဆနိုင်ပါတယ်
- သွေးစစ်ခြင်း - နှလုံးကြွက်သားတွေထိခိုက်တဲ့အခါ တချို့ ပရိုတင်းတွေ၊ အင်ဇိုင်းတွေပိုထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ သွေးစစ်တဲ့အခါ ဒီဓာတ်တွေ ပမာဏကို စစ်ဆေးပါတယ်
- ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း - အဆုတ်၊ နှလုံး အပါအဝင် အဓိကသွေးကြောကြီးတွေရဲ့ အခြေအနေကို သိရအောင် ဓာတ်မှန်ရိုက်ပါမယ် ၊ တကယ်လို့ အဆုတ်ရောင်တာ၊ အဆုတ်လေခိုတာ စတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေရင် ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့အခါ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
- ကွန်ပြူတာဓာတ်မှန်ရိုက်လိုက်ရင် အဆုတ်ထဲမှာ သွေးခဲပိတ်တာ၊ နှလုံးသွေးကြောမကြီးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြဿနာရှိမရှိ သိနိုင်ပါတယ်
ဒီလို အစပိုင်းစမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အောက်ပါစမ်းသပ်မှုတွေ ဆက်လုပ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်....
- နှလုံးအက်ကိုးခ် ရိုက်တာရှိပါမယ်၊ ဒီစမ်းသပ်မှုက အသံလှိုင်းတွေကိုသုံးပြီး နှလုံးကို ပုံဖော်ကြည့်ရှုတာဖြစ်တယ်
- နှလုံးသွေးကြောမှာပိတ်နေတာမျိုးရှိမရှိပို သေချာအောင် ကွန်ပြူတာဓာတ်မှန်ထပ်ရိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
- လူနာကို လမ်းလျှောက်စက်၊ အပြေးလေ့ကျင့်စက်ပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ခိုင်းပြီး နှလုံး၊ နှလုံးသွေးကြော၊ အဆုတ်စတာတွေ ရဲ့ ပြန်တုန့်ပြန်ပုံကို လေ့လာပြီး ဘယ်နေရာက ပြဿနာရှိနေသလဲဆိုတာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
- နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ဆို နှလုံးသွေးကြောဓာတ်မှန်ရိုက်တာရှိပါမယ်၊ ရိုက်တဲ့အခါမှာ ပျော့ပျောင်းတဲ့ပြွန်တစ်ချောင်းကို သွေးလွှတ်ကြောတစ်ချောင်းကနေ နှလုံးသွေးကြောတွေအထိ ရောက်အောင် ဖြည်းဖြည်းခြင်း ထည့်သွင်းပါတယ်၊ လိုအပ်တဲ့နေရာရောက်ရင် ပြွန်ထဲကနေဆေးတစ်မျိုးထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီး အပြင်ကနေ ဓာတ်မှန်ပြန်ရိုက်ပါတယ်၊ ဒီအခါမှာ သွေးကြောတွေအခြေအနေကို သေချာသိမြင်နိုင်ပါတယ်။
ကုသတဲ့အခါမှာလည်း ဖြစ်တဲ့အောက်ခံအကြောင်းအရင်းပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားပါတယ်။
- နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာတွေအတွက် သွေးကြောကိုပြန်ပြေလျှော့စေတဲ့ဆေးပေးလေ့ရှိတယ်
- တကယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က လူနာရင်ဘတ်အောင့်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းက နှလုံးနဲ့ပတ်သတ်နေတယ်လို့ ယူဆရင် အက်စပရင်ဆေးပြားတွေပေးနိုင်ပါတယ်
- သွေးကြောထဲမှာ သွေးခဲပိတ်တာမျိုးအတွက် သွေးခဲပျော်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်၊ သွေးပျစ်တာအတွက် သွေးကျဲဆေးပေးပါမယ်
- တကယ်လို့ ရင်ဘတ်အောင့်တာက အစာအိမ်ကြောင့်ဖြစ်တာဆို အစာအိမ်အက်စစ်ဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးတဲ့ ဆေးတွေပေးပါမယ်
- ဒါတွေကြောင့်မဟုတ်ပဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်အရကြောင့်ဖြစ်မယ်၊ ဥပမာ ရုတ်တရက်ဆောက်တည်ရာမရပဲ ကြောက်လန့်လွန်တဲ့ရောဂါမျိုးကြောင့်ဆို စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်ဖို့လိုပြီး စိတ်ကျရောဂါမှာသောက်ရတဲ့ဆေးမျိုးပေးမှာဖြစ်တယ်။
သောက်ဆေးပေးတာအပြင် ခွဲစိတ်ကုသတဲ့နည်းလမ်းတွေ၊ တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့လည်း ကုသပါသေးတယ်....
- တကယ်လို့ ရင်ဘတ်အောင့်တာက နှလုံးကသွေးလွှတ်ကြောတစ်ခုခုပိတ်နေလို့ဆိုရင် လူနာရဲ့ ပေါင် ဒါမှမဟုတ် လည်ပင်းက သွေးကြောကြီးတစ်ခုကနေ ပျော့ပျောင်းတဲ့ ပြွန်အသေးစားတစ်ခုကိုထည့်လိုက်ပြီး ဒီပြွန်လေးထဲကနေတစ်ဆင့် ပိတ်နေတဲ့သွေးကြောကို ပြန်ကျယ်လာအောင် stent တစ်ခုထည့်သွင်းပါတယ်၊ သွေးပုံမှန်ပြန်လျှောက်နိုင်အောင် stent ကို ကျဉ်းနေတဲ့သွေးကြောနေရာမှာ ထည့်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။
- သွေးကြောပိတ်နေတဲ့နေရာကို ပတ်ပြီး သွေးတွေစီးဆင်းအောင်ကုသလို့လည်း ရပါတယ်၊ ဒါကို bypass surgery လို့ခေါ်ပါတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တခြားနေရာက သွေးကြောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ယူပြီး ကုသပါတယ်။
- တကယ်လို့ နှလုံးသွေးကြောမကြီး ကွဲထွက်လို့ဖြစ်တာဆိုရင်တော့ အသက်အန္တရာယ်ပါ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမို့ ချက်ခြင်းခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
- တကယ်လို့ အဆုတ်ထဲလေဝင်လို့ဖြစ်တာမျိုးဆိုရင် အဆုတ်ထဲကို ပြွန်တစ်ခုထည့်သွင်းပြီး လေထွက်သွားအောင် လုပ်ပေးရပါမယ်။
ရင်ဘတ်အောင့်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ နှလုံးကြောင့်၊ အဆုတ်ကြောင့် စသည်ဖြင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေများသလို အသက်အန္တရာယ်အထိစိုးရိမ်ရတဲ့အကြောင်းတွေလည်း ပါဝင်တာကြောင့် ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဘတ်အောင့်တာမျိုးဖြစ်ရင် နီးစပ်ရာဆရာဝန်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ သွားရောက်ပြသကြည့်သင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆရာဝန်ဆီရောက်တဲ့ခါမှာလည်း ကိုယ်လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာအသေးစိတ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ အရင်တုန်းကလည်း ဖြစ်ဖူးမဖြစ်ဖူး၊ မိသားစုထဲမှာလည်း အလားတူဝေဒနာဖြစ်ဖူးတဲ့သူရှိမရှိ၊ လူနာအနေနဲ့ စွဲသောက်နေတဲ့ဆေးတစ်ခုခု ရှိလားစတဲ့အချက်တွေကို အသေးစိတ်ပြောပြပေးခြင်းအားဖြင့် ဆရာဝန်အနေနဲ့ ရောဂါကို အဖြေထုတ်ကုသရာမှာ ပိုပြီး အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။